३ कारणले गर्दा एकै उमेरका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्नु राम्रो !! जान्नै पर्ने कुरा - Experience Best News from Nepal
३ कारणले गर्दा एकै उमेरका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्नु राम्रो !! जान्नै पर्ने कुरा
धेरै उमेरको अन्तराल भएका जोडीबीच विवाह गर्नु राम्रो मानिन्न । धेरै उमेर फरक रहेको व्यक्तिबीतको विवाहलाई शारीरिक र मानसिक रुपमासमेत उचित मानिन्न । त्यसैले त नेपालको कानुनले समेत यौन जोडीको उमेर तोकेको छ । विवाह गर्दा कतिसम्म अन्तर हुने सोसमेत कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन देशका पुरूषकाे लिंग कति लामाे हुन्छ ? पढाैं सूचीसहित
कुन समयमा यौनसम्बन्ध राख्दा भइन्छ गर्भवती ? जान्नुहोस्
यी १० कारण महिलाहरुले लिन सक्दैनन् सेक्सका बेला चरम आनन्द !!
अध्यन भन्छ पुरुषमा प्रायः तीन दिनमा यौन चाहना अत्याधिक बढ्छ ?? के हो रहस्य जान्नुहोस् !!